Bleacher Report: အားကစားသတင်း၊ ရမှတ်များနှင့်အထူးများကို APK Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်သည်
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Bleacher အစီရင်ခံစာ: အားကစားသတင်းများ, ရမှတ်များ, & ပျေါလှငျ
Bleacher အစီရင်ခံစာ: အားကစားသတင်းများ, ရမှတ်များ, & ပျေါလှငျ APK ကို
နောက်ဆုံးပေါ်သတင်း, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှရမှတ်များ, စာရင်းများနှင့်သင့်အသင်းများအဘို့အပျေါလှငျနှင့်သင်၏ဂိမ်း Up ကို။
ပုံပြင်တွေဟာ NFL, NBA, MLB, NHL, NCAA, ရှိသမျှကမ္ဘာကြီး Football League နှင့်ပိုပြီးအနှံ့ကိုချိုးဖျက်အဖြစ်ချက်ချင်းသတိပေးချက်များကိုရယူပါ။ နောက်ဆုံးပေါ်ကောလာဟလများ, သတင်း, သငျလိုကျနာအပေါငျးတို့သလိခ်ကိုဖြတ်ပြီးဟောကိန်းများ ပတ်သက်. သိနေ။ သင့်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်အဖွဲ့ကပေါ်ကစားသမားများအတွက်နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်များနှင့်စာရင်းဇယားများ၏ရှိသမျှနှင့်အတူတစ်စိတ်ကူးယဉ်ချန်ပီယံဖြစ်လိမ့်မည်။
သင်အကြိုက်ဆုံးအသင်းများကို Pick နှင့်ချက်ချင်းသင်တို့အဘို့ကိုယ်ပိုင်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများ, ရယူပါ။ တစ်စိတ်ကြိုက်အားကစားအတွေ့အကြုံရှိသည်, အခြားသောကြီးတွေဇာတ်လမ်းကိုလက်လွတ်ဘယ်တော့မှမ။
သင်သည်အဘယ်သို့ Bleacher အစီရင်ခံစာထဲကနေရ:
☆တိုက်ရိုက်သတင်းများ, ရမှတ်များ, အချိန်ဇယား, စာရင်းများနှင့် NFL, NBA, MLB, NHL, NCAA ဘောလုံးကွင်းများနှင့်ဘတ်စကက်ဘော, MLS, UFC, WWE, ပရီးမီးယားလိဂ်, ချန်ပီယံလိဂ်, လာလီဂါအပါအဝင်အဓိကအားကစားလိဂ်ပွဲစဉ်များအားလုံးကိုဖြတ်ပြီးရပ်တည်မှု, , ဘွန်ဒစ်လီဂါနှင့်ပို။
သင်အကြိုက်ဆုံးအသင်းများ, ကစားသမားများနှင့်လိခ်များအတွက်ကိုယ်ပိုင်☆ In-depth ကိုဆောင်းပါးများ, ရလဒ်များကို, နှင့်ဗီဒီယိုပျေါလှငျ
သင်၏လူမှုအကောင့်ထဲမှာတိုက်ရိုက်နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်များရရှိရန် Bleacher Facebook ပေါ်မှာအစီရင်ခံစာ, Twitter, Instagram နှင့် Snapchat ကိုလိုက်နာပါ။
Bleacher အစီရင်ခံစာယခု download လုပ်ပါ။
သင် app ကို download လုပ်ပါပြီးနောက်, သငျသညျအောကျပါအခွင့်ပြုချက်တောင်းပါလိမ့်မည် ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ:
"တည်နေရာ" - ဒေသခံအဖွဲ့များနှင့်ပုံပြင်များအကြံပြု
"ဓါတ်ပုံများ / မီဒီယာ / ဖိုင်များ" နှင့် "သိုလှောင်" - streaming ဗီဒီယိုကိုထောကျပံ့ဖို့, ငါတို့သည်သင်တို့၏သိုလှောင်မှုအတွက်မီဒီယာ / files တွေကိုတည်းဖြတ်ဖို့နိုင်တော့မည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
•ငါ့ကို @ ပါ။ ပြန်စာများယခုသင်မှတ်ချက်များအတွက်တစ်ဦးပေါင်းလိုက်သောစကားပြောဆိုမှုစတင်ရန်သို့မဟုတ် join နိုင်အောင်အများကြီးချောမွေ့ဖြစ်ကြသည်။ Pro ကို-အစွန်အဖျား: WWE ပရိတ်သတ်တွေမှတ်ချက်များအတွက်ဖွိုဖို့ဘယ်လိုသိကြ၏။ မြင့်မားတလျှောက်နောက်ကိုလိုက်ရန်အကြံပြုပါသည်။
•မူကြမ်း SZN ။ Gruden ဘို့ဆုတောင်းကြလော့။ ဒါဟာဂုဏ်န Nashville တစ်ဦးရိုင်းတဦးတည်းဖြစ်ရဲ့နဲ့ငါတို့သည်သင်တို့အသီးအသီးများနှင့်တိုင်းရွေးဘို့ဖုံးလွှမ်းရရှိပါသည်။
• AJAX !!! ရုံကိုယ်ရောစိတ်ပါကြှနျုပျတို့သညျဤအသင်းကိုချစ် ... ပြောကြသည်။ ကျနော်တို့ 24 /7ချန်ပီယံလိဂ်ပျေါလှငျ, analysis လက်ဆင့်ကမ်းယဉ်ကျေးမှုနှင့်ထို့ထက် ပို. ရရှိပါသည်။
Bleacher အစီရင်ခံစာ: အားကစားသတင်းများ, ရမှတ်များ, & ပျေါလှငျ
34.67 ကို MB
Bleacher အစီရင်ခံစာ Inc က
Yahoo ကအားကစား - ...